Tareenka Xawaaraha Sare ee 300 Mileage wuxuu gaari doonaa Xawaaraha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTareenka Xawaaraha Sare ee 300 Mileage wuxuu gaari doonaa Xawaaraha
tareenka xawaaraha sare ma gaari doono masaafo
Tareenka Xawaaraha Sare ee 300 wuxuu Gaadhaa Xawaaraha; mid ka mid ah tareenka-xawaaraha sare ee Turkey ayaa awood u gaarey xawaaraha ugu badnaan aamusnaan dhex mariyey iriddii kadinka caasimada Ankara toddobaadkii la soo dhaafay. Tareennada Jarmalka laga sameeyo ee Siemens ee gaari kara xawaaraha kiiloomitir xNUMX kiilo mitir ma awoodi doono inuu xawaare kiiloomitir 300. Sida laga soo xigtay khubaro, sababta ayaa ah dayactir la’aan, dayactir iyo kormeerid ku aaddan biraha sababtoo ah shaqaale la'aan awgeed. Saraakiisha Ururka Ganacsigu waxay sheegeen in khadka xNUMX kiiloomitir uu ka jiro Konya oo keliya. Xawaare aad u sareeya laguma sameyn karo wadada ka timaada Istanbul ilaa Eskişehir.
SözcüSida ku xusan warkii Ugaur Enç; Ilk Diyaaradihii ugu horreeyay ee tareen xawaare sare leh oo ay amar ku siiso Agaasinka Guud ee TCDD ayaa gaaray Ankara usbuucii hore. Tareenno xawaare dheereeya leh, oo qaarkood ay keenayeen soo-saareyaal gudaha ah, ayaa laga soo saaray Jarmalka. In nooc tareen 12 in loo dhiibi doonaa Turkey oo la heli karo on line xadiidka xawaaraha sare SözcüYunus Yener, Madaxweynaha TMMOB Rugta injineerinka farsamada injineeriyada, wuxuu carabka ku adkeeyay in tareenada ka imanaya Jarmalka ay yihiin kuwa tayo wanaagsan isla markaana aan dhibaato ku qabin tareennada.
'CADAADADU MA AHAN KARAAN'
Yener wuxuu yidhi, Waan ognahay in tareenadan aaney dhibaato ahayn. Kuwani waa xirmooyinka tareenka xawaaraha ah ee 350 km / h. Si kastaba ha noqotee, khadkeena Konya ee 300 waa xariiq iyadoo loo eegayo xawaaraha km / h. Khadadka kale waa 250 km. Sababo nabadgelyo awgood, xawaaraha 250 km / h ayaa sidoo kale lagu gaari karaa khadadkaan 300 km isla markaana tareenka uusan ka bixin wadada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qiimo loogu talagalay raaxada rakaabka. Dardar-gelintaan raaxada ayaa la siin karaa, tusaale ahaan, xaqiiqda ah in rakaabka uu cabi karo shaaha isagoon ku shubin koobka. Sidaa darteed, marka loo eego xawaaraha raaxada, tareenada xawaaraha sare waxay ku safraan 250 km / h. ”
QARANKA IYO NINKA
SözcüHüseyin Kaya, Xoghayaha Guud ee Ururka Ganacsiga Tareenka, wuxuu dhaleeceeyay iibsashada tareenadaasi Jarmalka. Rock The, "Turkey baabuur Industry Co. Wuxuu in muddo ah ka shaqeynayay soo saarista tareenka korontada qaranka. 160 wuxuu ahaa tareen kaasoo taga meyrooyinka. Kadib, isbeddelo kala duwan ayaa la sameeyay si loo kordhiyo xawaaraha tareenka illaa kiloomitir 225. 2020 waxaa lagu dhawaaqay inay ku jiri doonto biraha. Annagu garan mayno sababta tareenkan aan loo filayn in loo diyaargaroobo
LINES CUSUB, MUQDISHO CAAFIMAAD
Turkey baabuur Industry Corporation (TÜVASAŞ) waxa lagu xiraa in Midowga Sakarya Tareennada Workers ', oo ahaan jiray Madaxweyne Branch Cemal ÒNebiga SözcüWuxuu sameeyay qiimeyn ku saabsan mashruuca tareenka iyo khadka tareenka xawaaraha sare. Yaman wuxuu sheegay in xawaare sare aan lagu sameyn karin wadada udhaxeysa Istanbul iyo Eskisehir. Yaman wuxuu sheeganayaa in iibsashada tareenada xawaaraha ee 300 laga soo qaado Jarmalka aysan muhiim ahayn.
Yaman wuxuu yiri: Kadib Eskişehir, 250 waa shaqo hufan oo xawaare kiiloo mitir ah. Sababtaas awgeed, tareennada awoodda u leh xawaaraha kiiloomitir 300-350 waa lama-huraan xilligan. Waxaan soo saareynaa tareenkayaga gudaha iyo kan qaranba mashruuca EMU ee Sakarya. Wuxuu noqon doonaa wadooyinka tareenka sanadka soo socda. 225 waxay awoodi doontaa inay xawaareyso maylalka. Halkii aan ka dalban lahayn Jarmalka, waxaan heli karnaa natiijooyin wanaagsan oo aan dardargelinno haddii aan diiradda saarno wax soo saarkeenna.
Sida laga soo xigtay wararka CNN, Japan waxay hadda tijaabinaysaa tareenka ugu dhakhsaha badan adduunka. Wadista tijaabada ee tareenka Shinkansen ALFA-X waxaa la filayaa inuu socdo seddex sano. Tareenka wuxuu gaari karaa masaafada 400.
YHT ilaa 300 illaa Konya
Konya 300 waxay gaareen tareenka xawaaraha
Xawaaladeena xawaaraha 300 ee Route ee loo yaqaan 'Ankara-Konya Route' ayaa la furfuri doonaa bisha Febraayo
Tareenka Xawaaraha Sare ee Cusub si uu ganacsi uga sameeyo 300 km / h
2035 waxay ku socotaa 10 shabakad tareenka gawaarida ah ee kun kiilomitir
Tareenka Shinkansen ALFA-X